Maitiro Ekugadzirisa Prestashop yekuwedzera SEO uye Shanduko | Martech Zone
Maitiro Ekugadzirisa Prestashop yekuwedzera SEO uye Shanduko
Chitatu, June 6, 2018 China, June 7, 2018 Ashley Marsh
Kuitisa bhizinesi kuburikidza nechitoro chepamhepo chinhu chakajairika mazuva ano nezvitoro zvisingaverengeke zvepamhepo zvinozadza Internet. Prestashop hunyanzvi hwakajairika kuseri kwemawebhusaiti akadaro.
Prestashop ndeye yakavhurwa sosi e-commerce software. Anenge mazana maviri nemazana mashanu ezviuru (angangoita 250,000%) mawebhusaiti pasirese anoshandisa Prestashop. Kuve tekinoroji inozivikanwa, Prestashop inopa nzira dzinoverengeka umo saiti yakavakirwa ichishandisa Prestashop inogona kukwidziridzwa yekumisikidza yakakwira mukutsvaga kwe organic (SEO) uye kuwana kutendeuka kwakawanda.
Chinangwa che chero e-commerce nzvimbo ndeyekukwezva traffic uye kuwana yakawanda yekutengesa. Izvi zvinogona kuitwa nekugadzirisa saiti yeSEO.
Hedzino dzimwe nzira shoma idzo SEO dzinogona kuitirwa kune Prestashop saiti:
Gadzirisa iyo peji renyaya - Peji rako rekumba rakafanana neako epamberi online. Nekudaro, haingofaniri kuve nekushamisa chete asi zvakare inofanirwa kuve yepamusoro kumusoro mune yekutsvaga mhedzisiro. Kuti uite kudaro, iwe unofanirwa kusanganisira zvemukati uye rako rakakoshesa kiyi kiyi pamwe chete nemifananidzo iri papeji rako rekutanga. Zvemukati zvepeji repamba uye chako chikuru chigadzirwa hachifanirwe kuchinja zvakanyanya nekuti ipapo injini yekutsvaga haikwanise kuona izvo zvakakosha kwauri. Zvakare, iro peji reimba rinofanirwa kukurumidza kurodha, risina kukanganisa, uye nekupa inonakidza kubhurawuza chiitiko.
Sarudza mazwi ako akakosha - Izvo zvakakosha kuti iwe utore ako mazwi akakosha uye uyedze mashandiro avo uchishandisa iyo Google Ads chishandiso icho chatova chikamu chekiyi kiyi kuronga. Iwe unogona kuwana kutsvaga kwemwedzi wepasirese uye kwemuno, kukosha, uye makwikwi emazwi akakosha Iwo mazwi ane avhareji yemakwikwi uye tsvakiridzo ndiwo akanakisa kukwikwidza ako akakosha mazwi. Chimwe chishandiso chakakodzera kufunga ndeche Semrush kunyange chiri chokushandisa chokubhadhara.
External links - Kuva nehukama kubva kune mamwe masaiti kune yako saiti zvakare yakajairwa SEO zano. Unogona kubata mabloggi uye mapepanhau ekuburitsa. Blogger vanogona kubvuma kunyora nezve chako chigadzirwa uye vape chinongedzo kune yako saiti. Izvi hazvizobatsire chete mukuvaka zvekunze zvinongedzo asi zvakare zvinowedzera mukana wewebsite yako kukwezva traffic kubva kune aya maratidziro. Iwe unogona zvakare kushambadzira ako ekudhinda kuburitsa pane akasiyana saiti inova zvakare yakanaka sosi yekukwezva traffic kune yako saiti. Imwe nzira yekuwana zvekunze zvinongedzo ndeyekunyora zvinyorwa zvevaenzi. Iwe unogona kuwana kuendesa kune yako saiti mune izvi zvinyorwa. Imwezve nzira ndeyekutsvaga saiti idzo dzataura saiti yako pasina kupa chinongedzo. Unogona kuvabvunza kuti vaise chinongedzo kune yako saiti.
Zadza zvese ruzivo rwechigadzirwa - Zadza ese anodikanwa minda senge chigadzirwa tsananguro, zvikamu, uye vagadziri vane zvepakutanga zvemukati. Izvi zvakakosha kubva pane SEO maonero. Zvakare, iwe unofanirwa kugara uchipa ruzivo rweanotevera - meta mazita, meta tsananguro, uye meta zvinyorwa mune chigadzirwa info machira. Iwe unofanirwa zvakare kupa yakakodzera URL.
Kusanganisira sarudzo dzekugovana munharaunda - Kuva nehukama hwekugovana mabhatani pane ako mawebhusaiti kunobatsira zvakare. Kana vanhu vakagovana zvemukati zvako neshamwari dzavo, zvinowedzera mikana yekuvakwevera kune yako saiti. Nenzira iyi, unogona kuwana vatengi vatsva kune webhusaiti yako.
Gadzira mepu uye marobhoti.txt - Iyo Google Sitemap module inokubatsira iwe kuvaka mepu yepaiti yako uye kuichengeta ichivandudzwa. Iyo faira yeXML inonyora ese masiti zvigadzirwa nemapeji. Iyo mepu inoshandiswa mukunongedza iwo mapeji uye nekudaro yakakosha kubva kuSEO maonero ekuona. Robots.txt iri faira-rakagadzirwa faira muPrestashop uye inozivisa yekutsvagisa injini nekutsvaira izvo zvikamu zveiyo Prestashop saiti kwete kunongedza. Izvo zvinobatsira mukuchengetedza bandwidth uye server zviwanikwa.
Kuva nekarenda yemukati uye zvinyorwa zvine mazwi akakosha - Kana yako saiti iine zvigadzirwa zvese zvechimwe chiitiko, saka unogona kushambadza zvinyorwa pane iwo chaiwo madheti nemamwe mapeji anongedzera kune ino peji. Iwe unogona kunyora zvinyorwa zvinosanganisira mazwi akakosha ayo anonyanya kukoshesa chiitiko. Nekudaro, mumwe haafanire kuyedza kuisa mazwi akawandisa akawanda muchinyorwa chimwe nekuti izvi zvinogona kukanganisa injini yekutsvaga.
Inokurumidza webhusaiti - Iyo inononoka ecommerce saiti inogona kudzikisa shanduko chiyero, kutengesa uye yekutsvaga injini masosi. Saka, zvakakosha kuti iyo webhusaiti inotakura nekukurumidza. Mamwe mazano akakosha ekuti uve nekukurumidza kurodha webhusaiti ndeaya:
Mifananidzo isina kunaka inogona kudzikisira webhusaiti saka zvakakosha kuti iyo mifananidzo igadziriswe kuti ikurumidze kurodha webhusaiti.
Iwe unofanirwa kubvisa ese asina kudikanwa mamodule sezvo iwo achiwanzononoka pasi webhusaiti. Idle module inogona kuzivikanwa nerubatsiro rwekugadzirisa kusagadzikana kubva kuPrestashop pani.
Kushandiswa kweCDN (Yemukati Dhirivhari Network) kunobatsira kurodha webhusaiti nekukurumidza kunyangwe munzvimbo dziri kure kure kubva kune inomiririra server.
Caching system yePrestashop kana iyo yakapihwa yechitatu-bato kunyorera seXCache, APC, kana Memcached inogona kushandiswa kukurumidza webhusaiti.
Iyo yakakurudzirwa query cache kukosha kweMySQL ndeye 512 MB. Iwe unofanirwa kunatsiridza kukosha kana kuri kusashanda zvakanaka.
Prestashop inopa yakavakirwa-mukati injini yekugadzirisa matemplate anonzi Smarty. Inogona kuve yakagadzirirwa kuita zviri nani.
Shandisa Schema.org - Schema kumaka inobatsira kuvandudza mawebhusaiti nekugadzira yakarongeka data markup schema iyo inonziwo yakafuma snippet. Inotsigirwa neese makuru enjini dzekutsvaga. Iyo "itemtype" tag inobatsira kupatsanura kana chimwe chinhu chiri webhusaiti, chitoro chepamhepo kana chimwewo. Izvo zvinobatsira kupa mamiriro kune mamwe mavara asinganzwisisike.
Uchishandisa Google Analytics neGoogle Search Console - Uchishandisa Google Analytics neGoogle Search Console inogona kuverengerwa muwebhusaiti nekuisa kodhi pawebhusaiti iyo isingaonekwe kune vashanyi vako. Google Analytics inopa ruzivo rwakakosha nezve webhusaiti traffic nepo Google Search Console ichibatsira kuwana kangani webhusaiti yacho kunyorwa mumhedzisiro yekutsvaga uye kudzvanya-kuburikidza data
Bvisa mapeji maviri - Hazvina kujairika kuti mapepa emiteuro anokonzeresa Prestashop. Ivo vane iyo yakafanana URL ine akasiyana parameter. Izvi zvinogona kudzivirirwa nekuve neiyo peji rimwe kana kushanda paPrestashop musimboti wezita rakasiyana zita, meta tsananguro, uye URL yepeji rega rega.
Shandisa redirections kana uchifamba - Kana iwe ukatamira kuPrestashop kubva kune imwe webhusaiti unogona kushandisa zvachose 301 redirect kuzivisa Google nezve iyo URL nyowani. Iwe unogona zvakare kushandisa redirect inogadzira chishandiso.
Kubvisa URL yekutaura - Prestashop 1.5 inogona kuburitsa URL neSpanish kodhi inova bhugi uye inoda kugadziriswa.
Kubvisa zvitupa - Prestashop inosimbisa pakubatanidza ID nezvigadzirwa, zvikamu, mugadziri, mutengesi, uye peji inova chipingamupinyi kuSEO. Nekudaro, maID aya anogona kubviswa nekushandura iyo yepakati kana kutenga module yekubvisa maID.
Uye zvakare, Prestashop zvakare inopa SEO module iyo inogona kubatsira zvakanyanya mukubata ese makuru SEO mabasa. Chinangwa chebhizimusi chero ripi zvaro chiri kuwana mari uye izvo zvinogoneka chete nekuwana chinzvimbo chakanak mitsva yekutsvaga injini. Prestashop inopa nzira dziri nyore umo SEO inogona kuitiswa ichiita sarudzo iri pachena ye e-commerce.
Tags: sei kutioptimizePrestashopseo
Ashley Marsh ndiye Senior- Zvemukati Munyori pa Zvikamu Maan Softwares Inc. Akave nekambani iyi kwemakore mana apfuura. Iye anozivikanwa muhunyanzvi hwekunyora mhando kunyanya mukusimudzira nhare, webhu dhizaini, uye ,azvino matekinoroji. Sekureva kwake, kwave kuri kuratidzwa kukuru kwaari sezvo zuva rega rega tekinoroji iri kuzvivandudza pachayo zvichikonzera mifungo mitsva inomuchengetedza nyowani zuva nezuva.
Dynamic Kubereka: AI-Inowaniswa Omnichannel Yemunhu Technology
Vanababa Zuva Ecommerce Statistics: 5 Zvinhu Zvese Brand Zvinodiwa Kuti Uzive